Expatriates Dubai - Anyị na-arụ ọrụ ugbu a na UAE 🥇
Anyị bụ ndị mmekọ na Middle East!
Ndị mba ọzọ n’obodo Dubai anyị ugbu a na - enyere gị aka itinye gị na Emirates. Anyị na-ewere ndị ọrụ si n'ahịa ọrụ mba ofesi. Ebumnuche anyị bụ igosipụta Ndị ọhụrụ a ga-achọ inweta ọrụ na Dubai. Anyị na-etinye gị na United Arab Emirates. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị si Pakistan ma ọ bụ ndị India na-agbapụta anyị na-achọ inyere gị aka chọta ọrụ na UAE.
N'aka nke ọzọ, ịrụ ọrụ na Emirates bara uru n'ezie ịnwale. Anyị bụ ugbu a na-anata ndị ọhụrụ mba ụwa maka inye aka na oru na Dubai maka ndị mba ọzọ. N'akụkụ aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị na-achọ ndị ọbịa mba ofesi na-elekọta ndị ọbịa. Anyị bụ ụlọ ọrụ zuru oke maka gị. N’oge a ka edobere ndi ochichi anyi n’otu ebe.
Ndị otu ndị ọrụ ndị ọrụ ndị na-ewe ndị ọrụ n'ọrụ aka na-enyere ndị ọrụ India gụchara ọhụrụ aka. Kaosinadị, ọ bụrụ na ị nwere ahụmịhe zuru ezu na azụmaahịa. Companylọ ọrụ Dubai City na-enyere aka n'ezie maka nyocha ọrụ dị n'etiti. Anyị na-arụkọ ọrụ ọtụtụ ebe ọrụ na Dubai. N'ebe na-adịghị mma, anyị na-atụ anya inyere gị aka inwere ọrụ, ma ịkwesịrị inwe ahụmịhe dị mma. Ọzọkwa, ịkwesịrị inwe ezigbo ihe ọmụma banyere omenala Arabic. Ma anyị na-atụ anya enyere gị aka inweta ọrụ n'ime Dubai ma ọ bụ Abu Dhabi.
Ndị ọrụ Middle East na ụlọ ọrụ anyị na-arụ ọrụ na-arụkọ ọrụ. Ugbu a na-enyocha ọtụtụ ọnọdụ. Ọmụmaatụ, Emirates na - akpọkwa ndị isi azụmahịa maka otutu oru. Ndị na-achọ ọrụ ọhụrụ na-enwe ohere dị elu maka ọrụ na Gulf. Anyị na-enwe ụfọdụ ọrụ ọrụ niile UAE, Qatar, Saudi Arabia na Kuwait. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị nwere ahụmịhe na azụmaahịa na ngalaba IT biko kwalite usoro ọmụmụ gị. Anyị na-echere gị na UAE na Qatar.
Ọrụ na Dubai maka ndị nduzi na-eduzi ihe ịga nke ọma
Otu n'ime ndụmọdụ kachasị mma maka nyocha ọrụ na-aga n'ihu maka ya. Na n'ezie, anyị nọ ebe a enyere gị aka ịghọ onye na-achụ nta n'ọrụ na UAE. Companylọ ọrụ Dubai City kpaliri ọtụtụ nde ndị na-achọ ọrụ. Karịsịa anyị na-achọ ndị ọrụ nwere ahụmịhe na-arụ ọrụ ná mba ọzọ. Ebumnuche anyị bụ iji duzie ndi na acho ndi oru n’iile n’uwa.
Mgbe ahụ kpalie ha ma n'ikpeazụ tinye ha na Dubai. Anyị bụkwa enyere ndị mba ọzọ aka na Filipino ịchọta ọrụ na Dubai. Mba ndị ọzọ iji nweta ihe omuma banyere ibi ndu ala Arabic.
Ndị na-ere ahịa na Dubai na-eji ọtụtụ ọnọdụ eme ihe. Otu n'ime ọnọdụ na-adọrọ mmasị nke anyị na-enyere gị aka inweta. Dịka ọmụmaatụ nwere ike ịbụ ọrụ ahịa na Dubai, Ọzọkwa nkwari akụ na nlekọta ọrụ. Ihe a niile biara iji chọta ọrụ nrọ na Dubai na ichebara nkọwa. N'aka nke ọzọ, ị nwere ike ịchọta ụfọdụ ọrụ ịtụnanya na-enye Uber.
Isi na onye ọ bụla expatriates nrọ bụ iji nweta Ụzọ ndụ Dubai. Dị ka mgbe ha na-eleta UAE ha hụ ka ndị Arab si baa ọgaranya. Site na nnukwu ụlọ ruo na ụgbọala egwuregwu. Can nwere ike ịhụ ka UAE dị ịtụnanya. Na mgbe ahụ nrọ gị bụ ịchọta ọnọdụ akwụ ụgwọ nke ọma. Ndị ọrụ ọhụụ anyị na-agagharị Dubai. Ekwela oge ị bara uru ma zipu akwụkwọ ọrụ na Dubai City. Ka anyị nyere gị aka inweta ọtụtụ ozi gbasara ọrụ.
Ezuru anyị na-aga Dubai
Anyị na-eduga ọrụ n'ụlọnga na Emirates. Anyị nwere tinye ndị India na-agbata ụgbọ na Pakistani ndị na-achọ ọrụ na Dubai. Mgbe ị na-achọ ịgbanwe ụdị obibi ndụ gị na Dubai. Bido ịghọ Dubai nke ndị mba ọzọ bịara ọhụrụ. Nwere ike bulite resume na ụlọ ọrụ anyị ma malite ichere ndu ohuru na uzo ndu na-ekwe ka ị banye na ozi-e gị.
N'akụkụ dị mma, ịnwere ike inweta ọrụ ọhụụ site na ala nna gi. Ịchọta ọrụ na-adọrọ mmasị na-enye n'UAE. Na enweghị nsogbu nkwekọrịta ọrụ nchịkwa mmadụ. Mgbe ahụ, gafegara ndị ọpụpụ ọhụrụ gị na njem Dubai. Ibuteghachi na mmalite ụlọ ọrụ anyị nwere ike inyere gị aka ịchọta ọrụ. Ya mere ma ọ bụrụ na ị bụ onye si mba India ị kwesịrị ile anya na ọrụ anyị.
Ziga CV n'aka ụlọ ọrụ anyị
Otu n'ime ihe atụ anyị na-emere gị. Ga - ejikọ gị ndị ọrụ nchịkọta na Dubai City. Tupu i zipụ CV, biko lelee ma mee otu nyocha nke ibi na Dubai. N’okpuru ọnọdụ ndị a, ịkwesịrị ịgụrụkwu gbasara ozi gbasara ụtụ ụlọ. Na ya gaa na gọọmentị obodo smart obodo web. Dị ka anyị kwuru na-UAE nwere agụmakwụkwọ dị iche iche dị na ya. Na ichikota echiche ozo banyere iga njem na akwukwo ndi ozo. N’inye isi ihe ndị a, iziga ịmaliteghachi iji nweta ọrụ abụghị isi. Ghọta dum esi malite ibi ndụ Dubai.
Expatriates Dubai anyị nwere ike inyere gị aka inweta ọrụ na UAE.
Ọrụ ndị ọrụ na Dubai International Airport
Na Dubai City, Dubai International Airport na-achịkwa ụgbọ elu ahụ. Ịmepụta ọrụ mmanye ọrụ. Ọrụ ọrụ ụgbọ elu bụ ụkpụrụ na inye usoro ụzọ ụgbọ okporo ígwè n'ime ọdụ ụgbọ elu. Nke ahụ nile na-abịakwute onye na-eke E nwere ọrụ ndị ọzọ dị na UAE. A ghaghị icheta anyị, maka otu ihe, ọrụ taxis nọ n'ebe niile ịbanye na Dubai. Ịmalite ọrụ dị ka onye na-anya ụgbọ ala ji akwụ ụgwọ. Ma n'ezie, nke a bụkwa ụzọ dị mma isi rụọ ọrụ na ọdụ ụgbọ elu.
DXB bụ onye ọrụ na-enye ọrụ. Maka ndị na-achọ ọrụ n'ụwa niile na South Africa na ọdụ ụgbọ elu na-akwụ ụgwọ na Dubai. N'aka nke ọzọ, e nwere Ọrụ Porsche na Ferrari dị ndị isi ụlọ ọrụ achụmnta ego na ụfọdụ isi na-achọ ile ndị ọrụ ọhụrụ na-achọ ọrụ maka ọrụ ụlọ. A pụkwara ịhụ ọrụ ọzọ dị elu na ọdụ ụgbọ elu dị elu. Enwere ebe ole na ole n'ụwa ebe ị nwere ike zigaghachi na ndị ọrụ nchịkọta. N'ezie, ọdụ ụgbọ mmiri Dubai bụ otu n'ime ebe ndị a, ị nwere ike ịnwa ịchọta ọrụ n'ebe ahụ.
Nkịtị na-eme ka ndị ọbịa n'obodo Dubai kwaga ebe ahụ. Nke a bụ ọmụmaatụ nke ibugharị echiche na Dubai. N’aka nke ọzọ, ndị isi azụmahịa azụmahịa nke Emirates bara ụba na-eji ụgbọ elu na ọnụ ọnụ mobile phones. Achọghị ka ha chere ruo mgbe nsogbu okporo ụzọ mebiri obodo ahụ.
Ndị bara ọgaranya na Dubai na-eji helikopta, obere ụgbọ elu ma ugbu a ọbụna drones ịga. E nwekwara ọtụtụ Pakistani ọrụ na Dubai. Ma n'ezie, ha na-eme ego na UAE. Ọzọkwa, ọ dị anya na Abu Dhabi na Dubai.
Kedu ka Ị ga - esi chọta ọrụ na ahịa ego ego Dubai?
Maka ebumnuche ịchọta ọrụ enweghị ọrụ. Ndị na-achọ ọrụ na-achọ ọrụ maka ahịa ego. E nwere asịrị na Middle East banyere Expo mmepe na 2020. Offọdụ ụlọ ọrụ na-eme nchọpụta maka ndị ndụmọdụ ego ahịa ahịa. Putzọ ya n'ụzọ ọzọ, ezumike na Dubai hụ ego n'anya. Ụgwọ ọrụ a na-efu oke, yana Ndị ọbịa India nabatara ọrụ ego na UAE. Ndị isi ego nke South Africa na-arụ ọrụ na ahịa ahụ. N'ikpeazụ, ugbu a ndị isi ụlọ ọrụ Pakistani na-agba ọsọ maka ọrụ ego na Dubai.
Ndị si mba ọzọ Ụzọ ndụ Dubai, ihe niile ị nwere ike ime bụ ebe a. Azụmaahịa niile. Dị ka ihe atụ nke ọrụ a, ụgbọ ala egwuregwu ndị ama ama ama na-abịa n'uche. Lamborgini Gallardo, Mercedes MLM, na SUV bụ ụgbọ ala ọkọlọtọ mgbe ị nwere ezigbo ego. Knowsnye maara nwere ike Porshe Panamera dabara gị mma ma ọ bụrụ na ị bụ ọkachamara na-ahụ maka njikwa. N'ezie, enwere nnukwu ohere maka ndị na-achọ ọrụ n'ụwa. Ọ bụ ezie na ahụmahụ gị ezughị.
Mgba na mma ụgwọ ọrụ a na-akwụ nke ọma na-akwụghachi onye ọ bụla ụgwọ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụrụ na ịnwe ezigbo ahụike. Can nwere ike ịmalite ma aghaghi icheta na nrụgide na-abata n’ọrụ a. Underrụ ọrụ n'okpuru nrụgide bụ ọrụ ụbọchị nkịtị. N'akụkụ na-adịghị mma, ọ bụghị mmadụ niile nwere ike ịrụ ọrụ na ahịa ego. Ọzọkwa, buru n’uche na e nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị a ma ama na Saudi Arabia. Ha na-akwụkwa ụgwọ maka ọrụ ọhụrụ na Middle East.
Ọrụ ịzụ ahịa na Dubai
Dịka eziokwu, ọ ga-adị mkpa ka ị na-eche banyere ụlọ akụ ọrụ na Dubai maka ndị mba ọzọ. Ọ bụrụ na ị bịara ná mba ọzọ, ị ga-akụ usoro ihe gbasara ụlọ ọrụ Dubai. Notghara ịkọwa akụkụ kachasị njọ nke akwụkwọ iwu akwụkwọ ụkọ akwụkwọ dị ukwuu na usoro ụlọ akụ. N’ezie n’uzọ ijikọ ọrụ. Ma ụfọdụ n’ime ha adịghị nyere gi aka ile anya. Ikwughi ihe di nkpa iji jeere ndi ahia ahia obula. A na-akwụ ụgwọ ọrụ a ma na-akwụghachi nnukwu ụgwọ ọrụ a iji mee ka ndi bi n’obodo Dubai di ndu.
N'otu oge ahụ, igwe na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ 24h. Na na Ndị uwe ojii Dubai na-arụ ọrụ nke ọma, i nwere naanị otu ụzọ. Achọpụtakwala mmejọ ọ bụla, naanị ị mehie njehie ma chụọ gị n'ọrụ. N'akụkụ na-adịghị mma, ị gaghị ahụ ọrụ na ego na UAE ma ọ bụrụ na i mehiere ihe. Kama nke ahụ, ịbụ onye a dọpụrụ ma wughachi ya na a ọrụ na Dubai. Maka n'aka na ọ ga-ekwe omume ma ọ bụghị na ego, ahịa ma ọ bụ ahịa ga-arụ ọrụ maka gị. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịbụ eziokwu na e nwere More online ọrụ saịtị. Na ndị ọrụ nchịkọta na nhọrọ na afọ ndị na-adịbeghị anya maka ihe dịka ọrụ ọrụ.
Ụlọ ọrụ Dubai na-arụ ọrụ maka ndị ahịa
Maka ọtụtụ akụkụ ọhụrụ ndị ọrụ na-achọ ọrụ na ezi mmụta. N’ikwu okwu n’uzo iwu dika ihe mbido. Na nsonaazụ, enwere ọrụ ọrụ 2,500 dị ka iwu iji wuo ụlọ kwa ụbọchị na Dubai. Ihe dị mkpa iji ghọta abụghị ụlọ A na - akwụkarị ụgwọ dị ka ndị nke e wuru mgbe nkwụ. N'inye ya ụzọ ọzọ ụlọ oriri na ọ hotelụ Jụ Jumeira ka na-arụ ọrụ n'oge ụfọdụ. Mpaghara kachasị ewu ewu na ihe owuwu UAE bụ Mirdif. N’oge a, a na-arụkwu ụlọ na ụlọ anyị ga-arụ ọrụ na ya. Ma ụlọ ọrụ ngo ọhụrụ na-ewughachi ụlọ ebe ahụ kwa ụbọchị.
Iji wuo ma wuo oru ohuru Dubai City na-anwa idi nma gi na otutu mmefu. Ka emechara site na mpaghara Arab bi ruo ndị si mba ọzọ si India, Pakistan, South Africa na ọtụtụ more. N'iburu nke a n'uche, ọbụlagodi enwere ike iwere ya na UAE. Na ibi na ulo obibi ohuru na Dubai n'okwu abuo. Yabụ na nchekwube na ndị si mba ofesi Dubai ga-achọ ọrụ. Na Dubai, enwere ọtụtụ ebe n'obodo nwere mkpọtụ ebe ị nwere ike ịrịọ maka enyemaka maka ịchọ ọrụ. Ọrụ ihe owuwu na-abụkarị nnukwu ụlọ ọrụ.
N’aka nke ọzọ, maka ndị si mba ọzọ nọ na Dubai. Kedu ndị na-achọ ọrụ njikwa ?. Site na ụgwọ ọrụ dị elu na ihe owuwu mmepe di elu. United Arab Emirates na-abịa na ezigbo ụgwọ ọrụ. Ma n'ezie na obodo mara mma ịmalite ibi ndụ Dubai. Maka otu ihe njikwa ọrụ na-arụ ọrụ iji hụ na ọ dị. Na-eleba anya na nkọwa na ụdị UAE. Ụlọ ọrụ na-ewu ụlọ na-adọrọ nnọọ mma ma saa mbara.
Kedu otu esi achọta na Dubai dị ka Ọrụ Expat Engineering?
N'oge na-adịghị anya ị ga-achọpụta UAE. N'ime weebụsaịtị anyị ma ọ bụ site na na-achọ ọrụ n'ịntanetị. Ọrụ ọrụ injinịa amachaghị nke ukwuu na Dubai. Inwekwu oru enwere ohere na obodo Mumbai. E nwere ihe ọzọ na-abịa na 2030 na Abu Dhabi karịa Dubai. Ụdị ohere ndị a abụghị ezigbo ụgwọ ọrụ.
Ị nwere ike ịnwe ogo mmụta a ma ama na nyocha. Ma enwere ole na ole ụlọ ọrụ nchịkọta na ị nwere ike ịkụ ịchọta ọrụ na mpaghara a. Anyị na-enye gị ndụmọdụ gaa na ụlọ ọrụ Middle East na ebe nrụọrụ weebụ Gulf na iru ndi isi ochichi. Ighachite resume maka mgbasa ozi ọrụ adịghị enwe uche dị ukwuu.
Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Dubai ka ndị ọpụpụ. Dịka ọmụmaatụ, enwere ọtụtụ ụzọ na Mpaghara obodo Dubai City ịchọta ọrụ. N'ihi nke a, ihe karịrị ndị 3 nde mmadụ na-achọ ọrụ na-agafe UAE. Ndị ọkachamara nke ọma na agụmakwụkwọ dị mma nwere ike inweta ọrụ na UAE. N'ikwu okwu n'ozuzu, ọ bụrụ na ịnwe ahụmahụ zuru oke iji chọta ọrụ nkwụsị ụgwọ dị oke akwụ ụgwọ. Ị nwere ike iji ọtụtụ Ndụmọdụ ndị metụtara Kuwait maka ndị na-achọ ọrụ. Onye ọ bụla makwaara na ịrụ ọrụ na Dubai fọrọ obere emere ndi ala ozo.
Ọrụ a na-arụ ọrụ na Dubai na nlọghachị enyemaka na UAE!
Ugbu a, anyị na-enyere aka itinye ndị ọgbọ
Karịsịa maka ọrụ na Dubai na Abu Dhabi
Chọta a Job na Dubai? ihe ijuanya na ị nwere ike ịchọta ọrụ nrọ ahụ Ebe nrụọrụ weebụ Dubai. Ha bara uru ka itinye ha na CV gị.
Naanị bulite malitegharịa na mmalite ọrụ ọhụrụ na Dubai!.